सिदार्थ इन्स्योरेन्सको कूल बीमा शुल्क करिब दुई अर्ब, अन्य सूचांक कस्तो ? – Insurance Khabar
सिदार्थ इन्स्योरेन्सको कूल बीमा शुल्क करिब दुई अर्ब, अन्य सूचांक कस्तो ?
प्रकाशित मिति : ३२ श्रावण २०७६, शनिबार ०८:१९
काठमाडौं । सिदार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को चौथो त्रैमासको अवधिसम्म करिब दुई अर्ब अर्थात एक अर्ब ८६ करोड १७ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । साथै सोही अवधीमा कम्पनीले एक अर्ब १५ करोडभन्दा बढि रकम दावी भुक्तानी समेत गरेको वित्तिय विवरणमा देखिएको छ ।
समीक्षा अवधीको अघिल्लो बर्षको तुलनामा कम्पनीको बीमा शुल्कमा चार प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले एक अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शु्ल्क आर्जन गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को चौथो त्रैमासको समीक्षा अवधिमा कम्पनीले २१ करोड ४३ लाख रुपैया खुद नाफा कमाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले २९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खुुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को चौथो त्रैमासको अवधिसम्ममा कम्पनीले ८२ करोड १८ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले ८८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो ।
वित्तीय विवरणमा कम्पनीको खुद बीमा आय पनि घटेको छ । कम्पनीले गत आवको चौथो त्रैमासको अवधिमा एक लाख १९ हजार २ सय ५ वटा बीमालेख जारी गरेको छ ।
गत आवमा हकप्रद र बोनस शेयर दिएर कम्पनीले चुक्ता पूँजी ६४ करोड १४ लाख रुपैयाँबाट एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउन सफल भएको छ । कम्पनीको बीमा कोषमा ६६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको जगेडा कोषमा १५ करोड ५५ लाख र रुपैयाँ संचित गरेको छ ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को चौथो त्रैमासको अवधिमा एक अर्ब १५ करोड ८२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ कुल दावी भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ९७ करोड ५७ लाख ३० हजार रुपैयाँ कूल दावी भुक्तानी गरेको थियो ।
कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी २१ रुपैयाँ ४३ पैसा रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ १०२ रुपैयाँ २८ पैसा छ । कम्पनीको प्रतिशेयर कूल सम्पत्ति २१९ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ ।